Guddoomiyaha KULMIYE oo caddeeyey mowqifka xisbiga iyo xukuumaddiisa ee abaarta iyo doorashada – WARSOOR
Guddoomiyaha KULMIYE oo caddeeyey mowqifka xisbiga iyo xukuumaddiisa ee abaarta iyo doorashada
Hargeysa – (warsoor) – Gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlay shir jaraa’id oo xisbiyadda qaranku kaga hadlay mawqifkooda ku saabsan arimaha doorashooyinka dalka.
Gudoomiye Muuse Bixii Cabdi ayaa sheegay in xisbiyadda qaranka ay isku waafaqsan yihiin in dalka ay ka jirto xaalada abaareed oo baahsan oo Ilaahay mooyaane aanay ciddina waxba ka qaban karin.
Gudoomiyaha Muuse ayaa sheegay in xisbiyadda mucaaridka ay ku kala duwanaadeen aragtidda ay ka taagan iyiin xaaladda abaarta dalka iyo arimaha doorashooyinka la filaayo inay dhacaan sanadkan aynu ku jirno.
Gudoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in ka xisbul xaakim ahaan uu mawqifkoodu yahay ka ay gaadheen komishanka doorashooyinka Somaliland oo ay u hogaansami doonaan wixii ay go’aan ka soo saaraan arimaha doorashadda iyo wixii la hal maala.
Halkan ka daawo shirkii jaraa’id ee gudoomiyaha xisbiga KULMIYE:
Gudoomiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee UCID Oo Caddeeyey Mawqifka Xisbigiisu ka taagan yahay doorashadda